Mpanamboatra kojakoja vy - Orinasa mpamatsy vy any Sina, mpamatsy
Ny fittings Connection dia ampiasaina amin'ny fanangonana insulator fampiatoana ho tadin-dokanga, ary ny insatera kofehy dia mifandray ary mihantona amin'ny sandry hazo fijaliana amin'ny tilikambo hazo. Ny fampiatoana ny fametahana sy ny fametahana clamp ary ny insulation Ny fifandraisana amin'ny substring, ny fifandraisan'ny fittings tariby sy ny towers poloney dia mampiasa ny fittings fifandraisana ihany koa. XYTower Fittings mpanamboatra peratra mihantona U miendrika ambongadiny Mampifandray fittings, fantatra koa amin'ny hoe faritra mihantona tariby. Ity karazana fittings ity dia ampiasaina ...
Ny fampiatoana fampiatoana dia ampiasaina hanamboarana ny tariby amin'ny tadin'ny insulator na hanantonana ny tariby fiarovana ny varatra. Amin'ny tsato-kazo mahitsy dia azo ampiasaina ihany koa izy hanohanana ireo mpitantana transposition sy fihodinan'ny fihenan-tsofina amin'ny tsato-kazo. Fametahana ny jumper an'ny tilikambo. Ny clamp sy ny mpiambina dia vy mora volavolaina, cotter-pin dia vy tsy misy fangarony, ny faritra hafa dia vy. Ny faritra ferrous rehetra dia alentika mafana.
Ny insulator dia fitaovana napetraka eo anelanelan'ny mpanentana amin'ny mety samy hafa na ny entona sy ny singa mety hitranga, ary mahazaka ny adin-tsaina sy ny fihenjanana amin'ny mekanika. Izy io dia fanaraha-maso insulated manokana izay afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny tsipika fandefasana overhead. Tany am-piandohan'ny taona, ny insulator dia nampiasaina tamin'ny tsato-kazo telegrafy. Miadana tsimoramora, maro ireo insulator miendrika kapila no nahantona teo amin'ny faran'ny tilikambo fifandraisana misy tariby avo be. Nampiasaina hampiakarana ny halaviran'ny creepage izany. Matetika vita tamin'ny vera na seramika izy io ary nantsoina hoe insulator. Ny insulator dia tsy tokony hahomby noho ny tsindry elektromekanika isan-karazany ateraky ny fiovan'ny tontolo iainana sy ny fepetra enta-mavesatra elektrika, raha tsy izany dia tsy hisy fiantraikany lehibe ny insulator ary hanimba ny fampiasana sy ny fiainana ny tsipika iray manontolo.
1.Size sy teknika data an'ny paingotra 33kv paingotra insulator TYPE: FP-33/8 Misy laharam-pahefana (KV) Misy lanjan'ny fihenjanana mekanika (KN) Haavo ny firafitra (mm) H Ny halaviran'ny fihodirana (mm) h Ny halaviran-dàlana kely (mm) 1min ny herinaratra mando maharitra mahazaka herinaratra (kv) Taratra herinaratra onja feno mahazaka herinaratra (tampon'ny sanda) 33 8 417 338 1160 90 200 2.Materialy 33kv pin post ins insitatera 1) .Fitrohana Silicon ho an'ny trano heva / trano. 2). Epo nohamafisina fibre vera ...
Ny fihenan'ny fihenjanana (clamp misy fihenjanana, clamp misy tsindrona, clamp maty-end) dia manondro ireo fitaovana ampiasaina hanamboarana ny tariby hitondra ny fihenjanan'ny tariby ary hanantona ny tariby amin'ny tadin'ny tady na ny tilikambo. Ny fantsom-pandrefesana dia ampiasaina amin'ny fifandraisana, zoro, ary fifandraisana terminal. Ny tariby vy vita amin'ny alim-by dia manana tanjaka mahery tokoa, tsy misy fihenjanana mifantoka, ary miaro ny tariby optika ary manampy amin'ny fihenan'ny hovitrovitra. Ny andiam-pandrefesana fantsom-pifandraisana optika dia misy ny: ...